Noocyo kala duwan "Hera": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Miro khudrad ah oo macaan ayaa dheeraaday. Si kastaba ha ahaatee, dhirtaas muddo dheer waxay qaadeen xaaladaha cimilada ee gobolka, iyo midhaha si deg deg ah u sii xumaatay. Xaaladdan oo kale, waxay noqotay lagama maarmaan in la gooyo noocyo jiilaal ah oo aan ka cabsanin dhaxan waxaana lagu kaydin karaa waqti dheer xaaladaha ku habboon.
Kalluun "Honey": dabeecadaha, beerashada agrotechnics
Cunto "Honey" waa furfurnaan, casiir leh oo leh malab dabayl ah. Geeduhu waxay ku qaataan meel yar oo beerta ah waxayna ku shaqeeyaan dayactirka. Xitaa xaqiiqooyinkaasi waxay ku filan yihiin inay ku beerto dulsaarayaasha noocyada kala duwan ee isteroberi. Taariikhda la qabadsiinta iyo gobolka taranka 1964-kii, koox cilmi-yaqaan ah oo ka tirsan Crimean ayaa u suurtagashay inay soo saarto noocyo kala duwan oo isteroberi ah - "Honey".
Kiimiko "Khafiifsan": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Thanks to xulashada joogtada ah ee isteroberi ah ayaa kor u kacay caan ah oo koraan ku dhowaad beerta oo dhan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in noocyada soo hagaagay waxaa lagu gartaa hardiness jiilaalka sare iyo fudaydka dayactirka, iyo sidoo kale tayada dhadhanka wanaagsan ee midhaha. Laakiin miraha kuwan ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale faa'iido, waxay ku jiraan xaddi badan oo fiitamiin iyo macdan.
Kiimikada "Rossoshanskaya macmacaanka": dabeecadaha, khibradda iyo iwm
Pear waa mid ka mid ah midhaha ugu badan ee suuqa. Maanta waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo noocyo ah oo ku qanciya xitaa dhadhanka ugu jilicsan. Cuntada "Rossoshanskaya macmacaanka" - mid ka mid ah midka ugu xiisaha badan iyo muuqaalka labadaba muuqaalka iyo dabeecadaha. Waa maxay faraqa u dhexeeya midhahaas?
Noocyo kala duwan "Century": dabeecadaha, garwaaqsadayaasha iyo khasaaraha
Pear waa mid ka mid ah dalagyada miraha ugu fiican. Maanta, arrin muhiim u ah koritaanka geedkan waa iska caabin qabow iyo cudur. Kaliya noocaa oo kale waa geedkii pear "Century". Ka dib markaad akhrido sharaxaadda daryeelka geedkan, waxaad ku gaari kartaa wax-soo-saarka beerahaaga.
Kala duwanaansho isdabajis ah "quruxda Bryansk": dabeecadaha, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Pear xilligii guga "Bryansk Beauty" waxaa loola jeedaa safka ugu weyn ee isteroberi. Tasters waxay siinaysaa calaamadaha ugu sarreeya ee casiir leh, hilibka macaan, midabka casaanka ee dhinacyada buuxa iyo muuqaalka qurxinta ee soo jiidashada leh. In sifeynta noocyo kala duwan, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso ma aha oo kaliya tayada dhadhan sare, laakiin sidoo kale is-bacriminta ee geedka, iyo khatarta ugu yar ee waxyeello by dhaxan hore.
Chear Chinese: sharaxaad, guryaha faa'iidooyinka iyo ka hortagga
Dad yar ayaa ogyihiin in pear-ka Shiinaha uu yahay mid cufan, midab leh oo cufan-macaan leh - macmacaan delicious ah, bakhaarka oo ah fitamiino, bac qurxin iyo xirmo gargaarka degdega ah isla waqti isku mid ah. Nashiimadayada Nashi ayaa intooda badan waxay u yimaadeen sababtoo ah dhadhankiisa aadka u wanaagsan, laakiin qodobkan waxaan ku siin doonaa abaalmarin dhammaan sifooyinka wanaagsan ee faa'iidada leh ee miro aan caadi ahayn.
Kala duwan oo kala duwan "Thumbelina" muuqaal, qarsoon ee beerashada guul
Xilliga xagaagu waa xilliga beergooyska iyo hadiyado deeqsinimo leh. Waqtigan waa inaan isku daynaa inaan ku raaxeysto dhadhanka weyn ee miro. Oo hadday gacmahooda ku koryeelaan, farxad bay ku kici doonaan marar badan. Sidaa daraadeed, jiinyeeradu waxay isku dayayaan inay keenaan noocyada ugu caansan uguna macaan. Iyo mid ka mid ah hadiyadaha sida bahalka waa mid ka mid ah pear ah ee kala duwan "Alyonushka" ("Thumbelina"), sharaxaad ka kaas oo aan sii bandhigi doonaa dheeraad ah.
Kala duwanaansho isdabajoog ah "Bariisiyaanka Belarus": sifooyinka, beerashada agrotechnics
Haddii aad raadinayso noocyo kala duwan oo pear ah oo aan awood u lahayn in ay ilaaliso tayada miraha, laakiin xitaa waqti wakhti ay awood u leedahay inay hagaajiso sifooyinka organoleptic - maqaalkan, shaki la'aan, ayaa loogu talagalay adiga. Waxay diiradda saari doontaa pear Belarusian dambe, sharaxaad ka duwan noocyada this, dareenka of beerto iyo daryeelaya waxaa.
Marka la eego kharashka miro pear ee suuqa, milkiilayaasha badan waxay raadinayaan noocyo kala duwan oo wax soo saar leh kuwaas oo soo saari doona miro macaan leh leh saxar jilicsan. Maanta waxaan ka wada hadli doonaa pear "Dukhmyanaya", sharaxaad kooban oo kala duwan, iyo sidoo kale ka hadal arjiga. Taariikhda hargabka Waxan haysanaa noocyo kala duwan oo Belarus ah, taas oo la helay sababtoo ah isgoysyada Aleksandrovka iyo Klapp jecelyahay.
Kiimiko "Casaan-gaduudan": dabeecadaha, siraha ee beerashada guuleysiga
Haddii aad go'aansato inaad ku beerato pear ku yaala sawirka, waa inaad si taxadar leh u doorataa noocyada kala duwan. Maqaalkeena ayaa sharxi doona "pear-reded" pear, iyo sidoo kale bixinta sifooyinka. Waxaan kuu sheegi doonaa sida loo beerayo geedka isla markaana u daryeelo. Taariikhda warshadda beeraha iyo gobolka taranka. Ururka cilmiga sayniska ee sayniska beeraha FSUE 'YUNISK wuxuu ku hawlanaa taranka noocyada kala duwan.
Pear Treasure: dabeecadaha, khibradda iyo iwm
"Qasab" waa nooc cusub oo dufan badan oo dhoobo ah. Maqaalkani, waxaan kugu martiqaadaynaa in aad barato sharaxaadda noocan ah pear, kala hadal farsamooyinka iyo xayawaanka, sidoo kale waxaad baran kartaa qaar ka mid ah xeerarka muhiimka ah ee daryeelidda geed. Taariikhda bilaabista "Qasnadda" - waa fikrad cusub oo xulashada koonfurta. Kala duwan ayaa laga helay Machadka Cilmi-baarista Farsamada Cilmi-baarista ee Moldavian of Chorticulture, Viticulture iyo Winemaking.
Pear waa mid ka mid ah geedaha midhaha ugu caansan, iyo miraha khudradda ayaa loo isticmaalaa labadaba isticmaalka cusub iyo samaynta macaanka, waxsoosaarka, khudradda la qalajiyey iyo macmacaanka kale ee macaan. Intaa waxaa dheer in dhadhanka u wanaagsan, pear sidoo kale wuxuu leeyahay content sare ee nafaqooyinka, sidaas beerta kasta waa in ay koraan ugu yaraan hal pear geed.
Milkiilaha kasta wuxuu rabaa inuu helo pears kala duwan, taas oo kaliya ma noqon doonto mid fudud oo loo daryeeli karo, laakiin sidoo kale waxay awoodaan inay soo saaraan alaabooyin leh dhadhan fiican. Inkasta oo noocyo kala duwan oo pear leeyihiin leeyihiin wax-soosaarka wanaagsan, waxay soo saaraan alaabooyinka aan lahayn dhadhan wanaagsan. Maanta waxaan ka wada hadli doonaa kala duwanaansho fiican ee warshadda caadiga ah - "Larinska" pear, iyo sidoo kale waxaan bixin doonaa sharaxaad buuxda ee kala duwan, aynu ka fikirno xulashada beerashada qalabka iyo daryeelka geed.
Kiimiko "Trout": dabeecadaha iyo beerashada agrotechnik
Bannaanka u khibrad badan waxay ogtahay sida ay u adag tahay in la doorto geedka meel yar. Ka dib oo dhan, waxaan rabaa beerta si ay uga farxaan isha ma aha oo kaliya beeraha si taxaddar leh, laakiin sidoo kale leh goosashada badan oo ah miraha qurux badan. Sidaa daraadeed, dad badan ayaa dareenka u leh geedo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, gaar ahaan isteroberi. Tixgeli muxuu yahay "pout" cajiib leh oo nagu ballanqaaday sharaxaadda kala duwanaanshahan, iyo sida loo xanaaneeyo geedahan ku yaal dhulkeena.
Kalluunka "Roobka": dabeecadaha, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Waxaa jira kumanaan nooc oo ah isteroberi, gacaliyaha midhaha oo dhan. Noocyo badan oo kala duwan ayaa loo yaqaan bacriminta. Mid ka mid ah waa pearbood qoryaha. Waxaa loo qaaday Ural, halkaas oo uu muddo dheer ka mid ahaa kuwa ugu caansan. Aan wax badan ka baranno. Taariikhda xulashada Dhammaan waxay bilaabeen xaqiiqda ah in bilawgii qarnigii sagaalaadna pear duurjoogta laga helay keynta Belgian, oo loo yaqaan 'Forest Beauty' kadibna noqday mid caan ah oo Yurub ah.
Kala duwanaansho isdabajis ah "Bere Bosc": dabeecadaha, khibradda iyo ixtiraamka
Noocyada hore ee pear-ka "Bere Bosk" lumay lumid muuqaalkii beeralayda muddo afar qarni ah. Kala duwan ayaa leh magacyo kala duwan: "Bere Alexander", "Bere Apremon", "Dhalo". Miro badan ayaa dillaacaan xilliga dayrta, laakiin sugitaankooda waa u qalantaa. Taariikhda Taranta Bere Bosc waa asalka Faransiiska: waxaa la siiyay meel u dhow Apremont (Champagne - Ardenes) horaantii qarnigii XYIII.
Kalluunka "Just Maria": dabeecadaha, faa iidada iyo xayawaanka
Kiimiko "Just Maria" - waa hadiyad adduunyo ka soo jeeda reer Belarusiyaanka. Waxay ka tirsan tahay kooxda ugu awooda badan, waxayna ku dhowdahay kuwa ugu fiican ee macmacaanka ah. Dad badan ayaa ku magacaaba warshad cajiib ah "Santa Maria" ee aan qabyo ahayn ee daryeelka iyo soo goosashada cajiibka ah ee leh tayada dhadhanka ee la yaab leh. Taariikhda dhirta "Pear" Just Maria "waa noocyo cusub oo ka soo jeeda asal ahaan ka soo jeeda Belaruus.
Pear "Starkrimson": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Kiimiko waa mid ka mid ah miraha ugu caansan uguna jecel cuntada. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ay yihiin kuwo aad u faa'iido leh oo la heli karo, si ka duwan miraha dibadda. Noocyo kala duwan oo geedo khudraddan ah ayaa qumman oo u horseedaya jahwareerka qaarkood sababtoo ah xaqiiqda ah in ay adagtahay in la go'aamiyo midkuu siin karo doorasho iyo beerta beerta.